JARNAK REAL ESTATE CO., LTD.
09781620225 9/27 Damasatkyar Road, Kalaw.
Send Message About Company
ကလော တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှားခြင်းကိစ္စတွေကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Website ဖြစ်တဲ့ www.yuzanarland.com မှာ ပိုင်ရှင်မှ ကနေ့ရောင်းမယ်ဆိုရင် ကနေ့၊ နက်ဖြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် နက်ဖြန် Up to date ဦးဦးဖျားဖျား တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Our Rate ကျွန်ုပ်တို့သည် သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်းဖြစ်သော- အရောင်းအဝယ်အတွက် သိန်း ၁၀၀ ထိ ၄ % သိန်း ၁၀၀ မှ သိန်း ၁၀၀၀ အထိ ၃% သိန်း ၁၀၀၀ မှ သိန်း ၁၀၀၀၀ အထိ ၂% သိန်း ၁၀၀၀၀ မှ အထက် ၁% နှင့် အငှားအတွက် တစ်နှစ်ငှားလျှင် ၁ လစာ ငှားပေးသူ ပိုင်ရှင်မှ ပေးဆောင်ရပြီး ၆ လငှားလျှင် ငှားပေးသူမှ လဝက်စာ ငှားရမ်းသူမှလဝက်စာ သာကျသင့်ပါကြောင်းနှင့် ပွဲညွန့်တင်ခြင်း ဈေးနှုန်းတင်ပြီး တောင်းယူခြင်း လုံးဝ မရှိစေသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းသူ အခြားအကျိုးဆောင်မှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိသော် Customer ဘက်မှာသာ ရပ်တည်၍ အရေးယူ မည်ဖြစ်ပါသည်။ အိမ် ခြံ မြေ နှင့်ပတ်သက်၍ လျှင်မြန် မှန်ကန် စိတ်ချ ရခြင်းနှင့် အတူ ✅ အတွေ့အကြုံကောင်းစွာရှိသော ဝန်းထမ်းများမှ ဝန်ဆောင်မှု့ပေးခြင်း ✅ ရောင်းသူ ဝယ်သူနှစ်ဦး တိုက်ရိုက် ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းစေခြင်း ( လိုအပ်ပါက ကူညီ၍လည်း ညှိနှိုင်းပေးပါတယ် ) ✅ ဝါရင့် ရှေ့နေများဖြင့် စာချုပ်အမျိုးမျိုး ကိုဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေး ချုပ်ဆိုပေးခြင်း ✅ စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးပေးခြင်း ✅ မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်အမျိုးမျိုး နှင့် ✅ ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးအရစ်ကျ ဝယ်ရန်အတွက် အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း * အရောင်းအဝယ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း * ✅ ပိုင်ဆိုင်မှု့ အမည်ပြောင်းရရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ✅ အခွန်ဦးစီး ဌာနတွင် အခွန်တင်ခြင်း ✅ ဂရမ်လျှောက်ခြင်း၊ ခွဲခြင်း နှင့် အမည်ပြောင်းခြင်းကဲ့သို့သော ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ သာမက ✅ ခြံစည်းရိုးတိုင် / အုတ်တံတိုင်း ခတ်ခြင်းနှင့် မျက် ပေါင်း ချုံ ပင်များ ရှင်းလင်းပေးခြင်း ✅ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် အပင်များစိ်ုက်ပျိုးပေးခြင်း ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှု့ လည်းရှိနေသောကြောင့် တစ်နေရာတည်း တစ်ထိုင်တည်းတွင် အစမှအဆုံးထိ အဆင်ပြေချောမွေ့ နိုင်သဖြင့် 💯💯 မိတ်ဆွေအတွက် Jarnak Real Estate Co., Ltd. သည် အကောင်းဆုံးနှင့် အသင့်တော်ဆုံး Company အဖြစ် တည်ရှိနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ……..🙂🙂
အမြိုးအစား Condo Apartment Land House Office Hotel Restaurant or Shop Industrial Warehouse Construction ရညျရှယျခကျြ ရောင်းရန် ငှားရနျ To Buy To Rent Build နရောဒသေ Yangon Region Ayeyarwady Region Bago Region Magway Region Mandalay Region Sagaing Region Tanintharyi Region Mon State Rakhine State Chin State Kachin State Kayah State Kayin State Shan State Nay Pyi Taw မွို့နယျ
JARNAK REAL ESTATE CO., LTD. လှနျခဲ့သော6နာရီ က
🌿 ခွံဝိုငျး ကယျြ ကယျြ နဲ့ သီး နှံ ပငျ မြား စိုကျ ရ တာ ဝါသနာ ပါတဲ့...
🥦 အေး ခမျြး တဲ့ ကလော မွို့ မှာ နေ ရငျး နှဈ ရှညျ သီး နှံ ပငျ မြား ကို စိုကျ ပြိုး ခငျြ တဲ့ မိတျ ဆှေ မြား အတှကျ ညီ မ တို့ ဆီ မှာ ခွံ ကှကျ က...
Land ရောင်းရန် 420 သိနျး $ 22,664
JARNAK REAL ESTATE CO., LTD. 20-May-2022
❤️ ကလော မွို့ . မွို့ လယျ ခေါငျ မှာ နေ ခငျြ တဲ့ မိတျဆှေ မြား အတ...
❤️ ကလော မွို့ . မွို့ လယျ ခေါငျ မှာ နေ ခငျြ တဲ့ မိတျဆှေ မြား အတှကျ အိမျခွံ ဝိုငျး လေး ရောငျး ဖို့ ရှိ ပါ တယျ နျော ……………❤️🔹 ချေါ ထား...
House ရောင်းရန် 5,000 သိနျး $ 269,811
JARNAK REAL ESTATE CO., LTD. 19-May-2022
🌸 အေး ခမျြး တဲ့ ကလော မွို့ မှာ ထငျး ရှူး တောငျ တနျး မြား ရဲ့ အလှ...
🌸 အေး ခမျြး တဲ့ ကလော မွို့ မှာ ထငျး ရှူး တောငျ တနျး မြား ရဲ့ အလှ တရား ကို ကွညျ့ရှူ ခံစား ရငျး အခွေ ခြ နေ ထိုငျ ခငျြ တယျ ဆို ရငျ ……🌸 ...
House ရောင်းရန် 2,000 သိနျး $ 107,924
JARNAK REAL ESTATE CO., LTD. 18-May-2022
🌺 အေး ခမျြး ပွီး တိတျဆိတျ ငွိမျသကျ တဲ့ နေ ရာ မြိုး မှာ နေ ခငျြ တ...
🌺 အေး ခမျြး ပွီး တိတျဆိတျ ငွိမျသကျ တဲ့ နေ ရာ မြိုး မှာ နေ ခငျြ တဲ့ မိတျဆှေ မြား အတှကျ ……🌺 🌲 ကလောမွို့ ရဲ့ ထငျး ရှူး ရနံ့ လေး ကို ရှူ ရှိုကျ...
Land ရောင်းရန် 500 သိနျး $ 26,981
🏘 Hotel ဆောကျ ခငျြ သူ မြား အတှကျ မွေ ပွနျ့ ပွီး View ကောငျး တဲ့...
🏘 Hotel ဆောကျ ခငျြ ပါ တယျ ဒါပမေဲ့ မွေ ကှကျ စိတျ တိုငျး ကြ မတှေ့ သေး လို့ စိတျ ညဈ နေ တဲ့ သူ​ဌေကွီး မြား အတှကျ …..❤️ ညီ မ တို့ စီ မှာ မွေ...
Land ရောင်းရန် 3,000 သိနျး $ 161,887
JARNAK REAL ESTATE CO., LTD. 13-May-2022
❤️ ကလော မွို့မှာ ပတျ ဝနျးကငျြ သနျ့ ပွီး အေး အေး ခမျြး ခမျြး နေ ခြ...
❤️ ကလော မွို့မှာ ပတျ ဝနျးကငျြ သနျ့ ပွီး အေး အေး ခမျြး ခမျြး နေ ခငျြ တယျ ဆို ရငျ …..❤️🌸 ညီ မ တို့ ဆီ မှာ မွေ ကှကျ လှ လှ လေး တဈ ကှကျ ရှိ ပါတယျ ခဈြ ရ တ...
Land ရောင်းရန် 2,000 သိနျး $ 107,924
JARNAK REAL ESTATE CO., LTD. 12-May-2022
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ကလောမွိုနယျ မှ💰 ဈေးနှုနျး -380❗️ဧရိယာ(၃၆×၇၅) ပကေယျြဝနျးနဲ့ပါလမျးနှဈဖကျမကျြနှာစာရှိပါတယျ။✅ ပိုငျဆိုငျမှုပုံစံ ၁၀၅...
Land ရောင်းရန် 380 သိနျး $ 20,506
JARNAK REAL ESTATE CO., LTD. 11-May-2022
🌳 ထငျး ရှူး ပငျ တှေ နဲ့ ဝနျး ရံ ထား တဲ့ ခွံ ကှကျ လေး ….🌳
🏠 အေး ခမျြး တဲ့ ထငျး ရှူး မွို့ တျော မှာ View ကောငျး ကောငျး နဲ့ Hotel ဆောကျ ခငျြ သူ မြား အတှကျ အရမျး အဆငျ ပွေ တဲ့ မွကှေကျ လေး ရှိ ပါ တယျ ရ...
To JARNAK REAL ESTATE CO., LTD.
Select Buyer / Renter Agent Other